संसदमा कस्तो ‘मर्यादा’ खोजिरहेछन् एमालेका सांसदहरू? « AayoMail
संसदमा कस्तो ‘मर्यादा’ खोजिरहेछन् एमालेका सांसदहरू?
2021,12 September, 5:11 pm
भदौ २५ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरे। मर्यादापालकहरूले रोक्न खोज्दा खोज्दै एमालेका सांसदहरू उनीहरूकै काँधमा चढे।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ओली सरकारले बजेटका लागि ल्याएका आर्थिक अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनलाई छेक्न खोजे। नाराबाजीकै बीच सभामुखले बैठक अघि बढाए। एमालेका सांसदहरूलाई छल्नका लागि मर्यादापालको घेराबीच अर्थमन्त्री दौडिएर रोष्ट्रममा पुगे।
त्यसपछि पनि एमाले सांसदहरूको हुलदंगा रोकिएन। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायतको माइक खोसेर रोष्ट्रमतिरै फ्याँक्न खोजे। संसदमा हुलदंगा गर्दै एमालेका सांसदहरूले ‘संसदीय मर्यादा कायम गर…’ भन्ने नाराहरू चर्काइरहे।
अनि बाहिर निस्किएर रोष्ट्रमतिर माइक फ्याँक्न खोजेकी एमाले सांसद रेखा कुमारीले पत्रकारहरूसँग भनिन् ‘त्यही माइक… जे पायो त्यसैले हानेर सभामुखको टाउको फोड्ने योजना थियो…।’
त्यही ‘डर’ थियो-आइतबारको बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाका वरिपरि तीनजना मर्यादा पालकले ‘सुरक्षा’ दिइरहेका थिए।
सबै तस्बिरहरू राससबाट
एमालेका सांसदहरूले संसदमा हुलदंगा गरिरहँदा सभामुखले पटक पटक भनिरहेका छन्- ‘संसदीय मर्यादा पालना गर्ने दायित्व हामी सबैको हो माननीय ज्यूहरू…।’
सभामुख सापकोटाले नाराबाजीमा उत्रिएका सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१का विभिन्न खण्डहरू पनि सम्झाइरहे।
उनले सम्झाएका नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ–
(क) सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नु पर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने
(ख) सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्ननहुने,
(ग) सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने,
(घ) संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने,
संविधानको धारा १०५ भनिएको छ– नेपालको कुनै अदालतमा विचारधीन मुद्दाहरुको सम्बन्धमा न्यानिरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पलानाको शिलशिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गरिने छैन।
अहिले संसदमा चर्किरहेको मुख्य मुद्दा नै यही हो। जो सभामुख सापकोटासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ। एमालेबाट अलग हुने बेला अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदलाई पार्टीबाट कारबाही गरेर निष्काशन गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले त्यो कारबाहीलाई स्विकार गरेन र उनीहरूलाई सांसदको मान्यता कायमै राखिदियो। त्यो बेलासम्म माधवकुमार नेपालहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरिसकेका थिए।
ओलीले त्यसरी कारबाही गरेको सूचना सभामुखले टाँस पनि गरेनन्। अनि ओलीले सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्। त्यो मुद्दा विचाराधीन छ, किनारा लागिसकेको छैन।
र, यहीबीचमा राष्ट्रपतिले भदौ २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिन्। एमाले सांसदहरूले संसद अघि बढ्न नदिने रणनीति लिए र त्यो दिनदेखि संसद अवरूद्ध नै छ। एमालेका सांसदहरूले ‘संसदीय मर्यादा’ चाहियो भनिरहेका छन्। हुलदंगा गरिरहेका छन्।
यो बीचमा संसदका कार्यसूचीहरू पनि प्रभावित भइरहेका छन्। ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्नका लागि प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दा पनि एमालेका सांसदहरूले रोके तर सभामुखले जवर्जस्ती बैठक चलाए। र संशोधित बजेट पनि आयो।
एमाले सांसदहरूले खोजेको मर्यादा र ओलीको निर्देशन
आइतबार पनि संसदको बैठक थियो। तर त्यो भन्दा अघि नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो। त्यो बैठकमा ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई ‘मर्यादित’ भएर विरोध गर्न आदेश दिए।
‘मर्यादापालकको घेरा तोड्ने हाम्रो कुनै नीति छैन’ ओलीले भनेका थिए ‘कसैको काँधमा चढेर माथि चढ्नुपर्दैन बेलमा उभिएर नारा लगाउनबाहेक अरू केही गर्नपर्दैन।’
ओलीले ‘सभामुखलाई हान्ने वा टाउको फुटाउने’ जस्ता कुनै पनि योजना नभएको भन्दै जे पायो त्यही नबोल्न पनि सांसदहरूलाई सचेत गराए।
‘सम्बन्धित विषयमा मात्रै नारा लगाउने हो। तोकिएको स्थानबाटै नारा लगाऔं। त्यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत सुर्‌याइँ देखाउने होइन’ ओलीले भनेका थिए ‘त्यस्तो माइकले हानेर टाउको फोड्ने भन्ने जे पायो त्यही मिडियामा नबोलौं। त्यस्तो केही छैन।’
तर पार्टी विभाजमा सत्तारूढ दलहरू र सभामुखकै समेत षड्यन्त्र भएको भन्दै उनले सदनमा विरोध कायमै राख्न पनि आफ्ना सांसदहरूलाई अह्राए।
देउवा सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि माधव नेपालहरू एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोलेका थिए भने महन्थ ठाकुरहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी खोलेका थिए। अहिले देउवाले त्यो विधेयक निष्क्रिय पार्न खोजिरहेका छन्। तर एमालेका सांसदहरूले संसद चल्न दिएका छैनन् र त्यो प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
‘सभामुखले प्रतिपक्षलाई फकाउन नसके संसद नै नरहनसक्छ’
ती ओली, यो संसद
तत्कालीन नेकपाभित्र चुलिएको विवादलाई साम्य पार्न नसकेपछि ओलीले संसदमाथि आँखा लाए। उनले पहिलोपटक २०७७ पुस ५मा संसद विघटन गरिदिए। त्यो बेला नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपाबाट ‘विद्रोह’ गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालहरू मिलेर दुई महिनाजित सडक संघर्ष गरे। अदालत गए। र अन्तत: फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई फेरि पहिलाकै ठाउँमा फर्काइदियो।
सर्वोच्चले ओलीका निर्णयहरूलाई असंवैधानिक करार दियो। संसद पुन:स्थापित भयो।
तर ठूलो दलको हैसियतमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री भए। र, पटक पटक उनले धम्कीको भाषा बोलिरहे– मलाई सहयोग गर्नुस्। संसद विघटन हुँदैन।
र, फेरि उनले २०७७ जेठ ७मा दोस्रोपटक संसद विघटन गरिदिए। उनले भन्थे – संसद भयो विरोध गर्ने। सरकारलाई काम गर्नै नदिने। अनि संसद विघटन भयो मुद्दा हालिदिने।
फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‌यो र संसद ब्यूँतियो।
तर यसपालि सर्वोच्चले एउटा बलियो नजिर बसालिदियो– अब चाहेर पनि संसद विघटन गर्ने कुनै विकल्पहरू दिएन। र, उसले संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दियो।
यसरी असार २९ गते प्रधानमन्त्री ओली सरकारबाट बाहिरिए। देउवा प्रधानमन्त्री भए। संसद सुरू भयो। देउवाले विश्वासको मत पनि पाए।
र, यही संसद जसलाई ओली आफैले पटक पटक घाँटी निमोठ्न खोजेका थिए त्यसैमाथि उभिएर आज उनका सांसदहरूले भनिरहेका छन् – संसदीय मर्यादा कायम गर…।
संसदको बाटो छेक्दै एमालेका सांसदहरू अहिले चिच्याइरहेका छन्। तर ‘संसदीय सर्वोच्चता’लाई आदर्श ठान्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने पेलेरै जाने रणनीतिमा छन्।
एमाले सांसदहरूको अवरोध छिचोल्दै आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिँदै गर्दा पत्रकारहरूले देउवालाई सोधेका थिए– प्रधानमन्त्री ज्यू, यसरी संसद कतिञ्जेल चल्छ? अनि देउवाले पनि फ्याट्ट भनिदिए– ओलीजीलाई सोध्नुहोला…।